Posted by Tranquillus | Feb 27, 2022 | Shabakada
B2B (ganacsi ilaa ganacsi) ganacsigu inta badan wuu ka adag yahay B2C (ganacsiga ilaa macaamilka). Waxaa jira tartan badan oo heerka B2B ah iyo daneeyayaal badan. Shirkadaha iibka ahi waxay raadiyaan inay ka iibiyaan iibsadayaasha khibradda leh ee raba alaabta ugu fiican qiimaha ugu fiican. Si kastaba ha noqotee, iyadoo la raacayo farsamooyinka saxda ah, dadka wax iibinaya waxay aad ugu guuleysan karaan B2B. Soo hel furayaasha guusha ganacsiga B2B, haddii aad ka timid door B2C ama hadda aad bilaabayso xirfadaada iibka. Robbie Baxter wuxuu ku dhex mari doonaa maalin caadi ah iibka B2B, laga bilaabo shirarka rajooyinka ilaa saxiixyada qandaraasyada…
Tababarka lagu bixiyo Linkedin Learning waa mid tayo wanaagsan leh. Qaar ka mid ah waxaa lagu bixiyaa lacag la'aan iyo iyada oo aan la diiwaan gelin ka dib markii la bixiyay. Markaa haddii mawduuc ku xiiseeyo, ha ka waaban, ma niyad jabi doontid.
Haddii aad u baahan tahay wax badan, waxaad isku dayi kartaa rukunka 30-maalmood ee bilaashka ah. Isla markiiba ka dib isdiiwaangelinta, jooji cusboonaysiinta. Tani waxay adiga kuu tahay hubanti ah inaan lagu dacweynayn ka dib wakhtiga tijaabada. Hal bil gudaheed waxaad haysataa fursad aad ku cusbooneysiiso mowduucyo badan.
Digniin: Tababarkan ayaa loo malaynayaa inuu mar labaad bixin doono 30/06/2022
B2B ganacsiga Febraayo 27, 2022Tranquillus
READ Saxiixa heshiiska Action Logement
socdaRaadinta telefoonka ee guuleysta
Laga soo bilaabo ixtimaalka ilaa qiyaasta Bayesian